"Mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo ; fa momba ny fakam-panahy dia hasiany làlana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany." 1 Korintiana 10:13
"Eny, fa na dia mampahory aza Izy, dia mbola hiantra ihany." Fitomaniana 3:32
Nanoratra ho an’ny Filipiana ny apostoly Paoly, tamin’izy voafonja tany Roma noho ny finoany. Na dia tao an-tranomaizina aza izy, dia niresaka momba ny fifaliany lalina ao anatin’ireo toe-javatra faran’izay sarotra diaviny. Mitaona ny mpino izy mba hifaly mandrakariva ao amin’ny Tompo. Satria mpifatotra toy izany no manoratra, dia manana hevitra misongadina manokana ireo fampirisihana ireo, ho an’ny mpino ankehitriny.
Nefa ao amin’izany taratasy izany, dia milaza ihany koa ny aretin’i Epafrodito sakaizany i Paoly. Nankasitraka izy, nahatsapa fa notsimbinin’Andriamanitra. Hoy izy: “Andriamanitra namindra fo taminy, ary tsy taminy ihany, fa tamiko koa, fandrao hanana alahelo mifanontona aho” (Filipiana 2:27).
Tsy misy fifanoherana ve ny firesahana alahelo, ao anatin’ity epistily miresaka fatratra momba ny fifaliana ity? Tsia, fa vonona i Paoly tsy ho ketraka, mizaka ireo fizahan-toetra misesisesy, satria ny Tompo no fifaliany.
Mitaona antsika hifaly mandrakariva ao aminy ny Tompo, kanefa koa tsy milaza hoe tsy tokony ho tohina amin’ny fahoriana isika. Andriamanitra dia Andriamanitra mangoraka. Fantany fa mety tohina isika, fantany izay zakantsika, ary tsy mihoatra izany na oviana na oviana Izy, rehefa mamela zava-mahory hitranga eo amin’ny fiainantsika.
Ry kristiana, aoka àry isika hatoky mandrakariva ny famindrampon’Ilay Andriamanitsika sy ireo fikarakarany feno fitsimbinana, ho antsika sy ny olona akaiky antsika. Fantany, voalanjany ary voarefiny am-pahendrena ny zavatra rehetra.
Aoka hiainana ny hoe ny zava-tsarotra mitranga dia tsy hahafafa na oviana na oviana ny fanantenana, ny fiadanana, ary na dia ny fifaliana kristiana aza.